एक अन्तिम मौका जिन्दगीलाई - Dipkhabar - Online News Destination
एक अन्तिम मौका जिन्दगीलाई
-वान लास्ट चान्स टु लाईफ
“मुझ्से पेहली सि मुहब्बत, मेरे मेहबुब् ना मागं….!”
आफ्नो सबैभन्दा प्रिय गजल बजाइरहेछ ऊ।यस गजलका शेरहरु उसको जिवनसगँ ठ्याक्कै मेल खान्छन्, त्यसैले पनि यो उसको प्रिय गजल हो सायद ! आफ्नो प्रिय गजल बजिरहेको बेला प्रिय मृत्यु अँगाल्ने सोच्यो क्यार उसले।जुरुक्क उठ्यो ढल्किरहेको बिस्तराबाट र पल्लो कोठा तिर गयो । केही मिनेटपछि आफ्नो दाहिने हातमा धारिलो ब्लेड लिएर फर्कियो ऊ, आफ्नो कोठाको ढोका ढप्कायो र चुकुल लगायो । बजिरहेको गजलसगैं लय मिलाएर गुनगुनाइरहेछ ऊ,
“लौट जाती है उधर को भी नजर क्या किजेअब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या किजे !”
टुसुक्क बस्यो ऊ भुइँमा पलेटी कसेर सायद उसका गोडाहरुलाई आफ्नै शरीर भारि भएको छ , जसरी संसारलाई ऊ आफू भारी भएको छ ।अब दुनियाँ जति सुन्दर भए पनि ऊ हेर्न चाहँदैन । ऊ आँखा चिम्लन चाहन्छ, सधैँका लागि!
ऊ हेर्छ , धारिलो ब्लेडलाई र कलिलो छालालाई । ऊ हेर्छ धारिलो समयलाई र कलिलो आफैँलाई । उठायो आफ्नो दाहिने हात र अलि जोडले समायो ब्लेड र राख्यो आफ्नो देब्रे हातको नसाको ठिक माथि ।त्यो धारिलो ब्लेड र कलिलो छाला बिचको दूरी हो ,जीवन । ब्लेडलाई छाला चिरेर नसा काट्न जति समय लाग्छ , त्यती सम्म चल्नेछ उसको सास । त्यसपछि के हुनेछ उसलाई थाहा छैन ।कहाँ पुग्नेछु ? के हुनेछ ? तर ,जसलाई आफ्नो जीवनमा के भइरहेछ थाहा छैन, उसलाई मृत्युपछि के होला भन्ने पर्वाह नै नहुने रहेछ । जे होस् , बालै भएन ।
“ और भि दु:ख हैं जमाने में मोहोब्बत के सिवाराहते और भि है वस्ल कि राहत के सिवा”
तर,उसले दाहिने हातको ब्लडेलाई देब्रे हातको नसासम्म पुग्न दिएन!के सोच्यो कुन्नी उसले दह्रो गरी समातेको ब्लेड भुईमा खसालिदियो र डाँको छोडेर रोयो । आफ्नै हातले पड्कायो आफ्नै गाला , चिर्थोयो अनुहार , जगाट्यो कपाल र ठोक्यो टाउको भित्तामा ।
सोचेछ क्यारे, आज एक अन्तिम मौका दिन्छु जीन्दगीलाई, ‘ वान लास्ट चान्स टु लाईफ’। एक दिन दिन्छु अब जीन्दगीलाई , यो एक दिनमा कसैले मलाई तँ बाँच्नु पर्छ, तेरो अस्तित्व छ, तँ छुट्टिएर जानु भनेको त मुटुको आधा टुक्रा हुनु हो भनिदियो भने ठिकै छ, नभए ठिक यसैबेला भोलि, यहि ब्लेडले यहि ठाउँ चिरिदिन्छु ।उडिजान्छु यहाँबाट ।
बजिरहेछ अझै ,
“तेरी सुरत से हे आलम बहारोंको सबाततेरी आँखोके सिवा दुनिँया मे रखा क्या हे !”—————————————
हो, अब सोच्नुहोस् त , तपाई दिनमा साधारण कति व्यक्तिसंग भेट्नुहुन्छ , कति व्यक्तिसंग बोल्नु हुन्छ रोकिएर र कतिसंग बोल्नु नपरे हुन्थ्यो भनेर मुख लुकाउदै हिड्नुहुन्छ । कतिलाई भिडमा चिच्याई चिच्याई उसको नाम लिएर बोलाउनु हुन्छ । कतिले चिच्याई चिच्याई तपाईंको नाम लिएर बोलाउछन् तर पनि तपाईं सुनेको जसुने जसो गरी हिड्नुहुन्छ । कतिसगं भेट्दा झ्याप्पै अगांलो लाग्नु हुन्छ , कतीलाई भेट्न नपरे पनि हुन्थ्यो भनेझै गर्दै भेट्नुहुन्छ । माथिको मानिस जसले जीवनलाई एक अन्तिम मौका , एक अन्तिम दिन दिएको थियो,‘वान लास्ट चान्स टु लाईफ’ । त्यो मान्छे तपाईंले साधारण भेटेको मान्छेहरुमै छ । दिनमा भेट्ने मान्छेहरुको भिडमै छ । त्यो मान्छे अगांलो, प्रेम खोजिरहेछ । उ हिडिरँहदा उसलाई बाटोमा अचानक भेटेर, खुसीले बुरुक्क उफ्रिने मान्छे खोजिरहेछ । उसको हात च्याप्प समाएर गर्लयाम्म अगाँलो लगाउने मान्छे खोजिरहेछ ।अनि सोच्नुस् त, तपाईं नै उसलाई नदेखे जस्तो गरेर हिड्नु भयो भने?
उ बेलुका गएर आफ्नो नसा काट्नेछ र त्यो आत्महत्याको कारण तपाईं हुनुहुनेछ ।
मलाई लाग्छ, हामी सबै हत्यारा हौं।हामी नजिकको कोही न कोही मान्छे जो दिनभर हामीसँग मुस्कुराएको छ , हिँडेको छ, डुलेको छ, बेलुका घर गएर आत्महत्या गरेको छ।यसको मतलब, हामी दिनभर ऊ सगै हुँदापनि उसलाई ऊ हुँदाको रौनक र नहुँदाको अभावबारे महसुस हुन दिएनौ।यति निच भई सकेछौं हामी कि उसलाई झ्याप्प अगाँलो लगाउन बिर्सिएछौं, तँ बिना हामी अपुरो छौं भनेनौं, उ हुनुको अस्तित्व उसलाई महसुस हुन दिएनौं ।
तपाईंले दिनमा सयौं, हजारौ मान्छे भेट्नुहुन्छ ।ति मध्ये जसले पनि एक अन्तिम दिन , एक अन्तिम मौका दिएको हुन सक्छ जीन्दगीलाई, बचाऔं तिनीहरुलाई । बेलुका गएर ब्लेड, डोरी वा विष समाउन बाध्य नबनाऔ । त्यसैले जसलाई भेट्नुहुन्छ झ्याप्प अगाँलो मार्नुहोस्, खुसि हुनुहोस् । तिमीसँग भेट्दा र हुदा म मुस्कुराउछु भनिदिनुस्। तिमी हुनुको ठुलो अर्थ छ मेरो जीवनमा भनिदिनुहोस् , ताकि बेलुका गएर उसले आफूलाई मृत्युको अंगालोमा सुम्पिनु नपरोस्।र तपाईं,दिनभरि संगै डुलेको साथीको , भोलिपल्ट मलामी जान नपरोस्।
कसैले जाउ , भन्दा पनि उसको छेवैमा बसिरहनुस्जान्छु भन्यो उसले भने, नजाउन भनिदिनुस् एकचोटिकसैलाई छोड्न तल / बाहिर गेट सम्मै पुग्नुस्तिमी पुगेपछि फोन / मेसेज गर है भनिदिनुस्खाना खाऊ है भन्नुस्भोलि भेटौ न भन्नुस्
बस् यस्तै यस्तै सानो सानो कुराले तपाईं/ हामी मिलेर” वान लास्ट चान्स टु लाईफ” दिनेहरुलाई बचाउन सकिन्छ।